Ahoana ny fomba famongorana sy fametrahana colokworkMod Recovery amin'ny Huawei u8110 | Androidsis
Amin'ny lesona manaraka dia hampianariko ianao ny fomba hanonganana sy hametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Huawei u8110, terminal mora vidy ary fampisehoana teknika tena tsara.
Misy programa toa ny SuperOneClick afaka mahazo faka fakany fitaovana AndroidAmin'ny sasany dia miasa tanteraka izy io, amin'ny hafa etsy ankilany, sarotra ho azy ireo ny mamaka na tsy mandeha fotsiny.
Raha ianao Huawei u8110 Efa miorim-paka izy io, na inona na inona rafitra ampiasainao, azonao atao ny mandingana ny dingana voalohany ary afaka mankany mametraka ClockworkMod Recovery.
Voalohany indrindra tsy maintsy mampidina ireo fisie ilaina isika Mba hahatratrarana ny asanay amin'ny fomba mahomby, rehefa ampidininao izy ireo, esory ny fisie ao amin'ny biraonao Windows ary ao anatiny dia afaka mahita ireto lahatahiry telo ireto ianao:
1 Fanomanana ny Huawei u8110
2 Fanomanana ny PC
3 Mamaka ny Huawei u8110
4 Fametrahana ClockworkMod Recovery
Fanomanana ny Huawei u8110
Zava-dehibe ny fananantsika ny baterin'ny terminal feno 100 x 100 amin'ny fahaizany, io dia hisorohana ireo loza mety hitranga sy ny tselatra ratsy, koa hampihetsika ny Famafana USB hita teny amin'ny làlana: menio / toerana / fampiharana / fampandrosoana.
Fanomanana ny PC
Amin'ity dingana ity hapetrakay ny mpamily ilaina mba hahafantaran'ny solosainantsika ny momba antsika Huaei u8110 ary tsy manana karazana olana izahay, noho izany dia hanokatra ny fampirimana izahay Pulse_Driv ary hapetrakay ny mpamily ilaina arakaraka ny andiany ny Windows.
Vantany vao tafapetraka ny mpamily hamerina ny solosaina izahay ary hanohy amin'ny dingana manaraka izahay.
Mamaka ny Huawei u8110
Manomboka amin'ny telefaona maty tanteraka, hampifandray ny finday amin'ny alàlan'ny usb amin'ny solo-sainantsika manokana isika, ary amin'ny fotoana anaovan'ny sary famantarana bateria, ho tsindrio miaraka amin'ny bokotra manaraka ireto fitambarana bokotra manaraka ireto: volume midina + manantona bokotra + fahefana.
Miaraka amin'ity ny Huawei u8110 hiditra amin'ny maody bootloader, izay ahafahantsika mamongotra azy tsy misy olana amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ilay rakitra Superboot-windows.bat, hita ao amin'ny fampirimana 1.0-pulsemini-superboot. (Ho fantatsika fa amin'ny bootloader mode izy io satria hahantona amin'ny sary famantarana ny orinasa).
Mandritra ny fizotry ny tsy maintsy hongotantsika dia hisokatra ny terminal, izay, tsy maintsy tsindrio ny safidy Avelao hamita tsara ilay programa miorim-paka ny Huawei.
Azontsika atao ny manamarina fa ny
Fametrahana ClockworkMod Recovery
Raha hametraka ny ClockworkMod Recovery, dia tsy maintsy apetratsika ny Huawei u8110 amin'ny fomba bootloader mampiasa ny fitambaran'ireo bokotra voalaza etsy ambony amin'ny fotoana itondrantsika azy amin'ny alàlan'ny USB amin'ny PC.
Avy eo dia hanatanteraka ilay fisie izahay install-recovery-windows.bat hita ao amin'ny fampirimana 1.8.1.4-pulsemini-famantaranandro ary miandry ny famerenan'ny finday azy indray izahay.
Nitranga tamiko manokana fa ny Huawei dia tsy namerina ahy irery, matetika dia mitranga izany indraindray, miandry fotoana mety ihany isika, sao mbola mandeha ny programa, ary notapahinay tamin'ny PC izany ary averinay indray izany manala ny bateria ary manolo azy.
Hanana ny Huawei u8110 miorim-paka ary miaraka aminy Recovery vonona ny hametraka romana novaina hanitatra sy hanatsara ny fahombiazan'ity terminal lehibe ity.
Ampidino - Huawei u8110
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei u8110, ny fomba famongorana sy fametrahana ClockworkMod Recovery
Izy io dia miasa tsy misy olana amin'ny voalohany.
Miasa amin'ny Huawei U8650
Nika-maizina-eritreritra dia hoy izy:
Aiza no hametrahako azy hametraka azy amin'ny u8650? ny rohy rehetra dia manome ahy hadisoana
Valio i Nika-dark-Thoughts
Paaaaaablo dia hoy izy:
Ahoana no hametrahako ireo mpamily?
Mamaly an'i Paaaaaaablo